KT210 CT / PT Mpanadihady
K68i Universal Relay Test napetraka
KF900A Portable manan-tsaina ...
Mavesatra maivana: 10kg, bitika kely dia mora entina amin'ny dia lavitra.
6x30A, fantsom-pamokarana 6x310V analog.
Ny fitsapana famoahana 6-dingana mifototra napetraka miaraka amin'ny vahaolana avo lenta sy vahaolana feno (manaraka ny lanjan'ny santionany IEC61850 sy ny GOose), mahafeno tanteraka ny fepetra takiana amin'ny detection sy debugging an'ny IEC61850 IEDs, merge Units, ny rafitra fanaraha-maso ny station ary ny relay fiarovana nentim-paharazana.
All-in-One design, Integrated IEC61850 SV & GOose, 6I + 4V analog fantsona output, Inbuilt GPS sy IRIG-B, ary ny hafa mialoha asa.
Volavola iray manontolo, lanja <17.5kg;
Hery lehibe & Fahamarinana misy 6x35A & 4x310V output analog;
Mankato ny lanjan'ny santionany IEC61850 & GOose;
Ny modely fitehirizam-boky mitombo tsy mitsaha-mitombo;
Fomba fampiasa mialoha toy ny metatra angovo sy ny fikajiana transducer sns.
KF900A Portable Intellect IEC61850 IEDs Analyzer Test
Fitaovana fanandramana feno dia mivoatra mifototra amin'ny fitsapana substation marani-tsaina, ny ankamaroan'ny fiasa dia ny fitsapana ny relay fiarovana, ny fanadihadiana ny lanjan'ny santionany, ny fanadihadiana / fampitahana rakitra SCD ary serivisy MMS. Mety amin'ny detection sy ny fitsapana ny fitaovana IED toy ny relay fiarovana ny lozisialy manan-tsaina, fitaovana fandrefesana sy fifehezana, singa mitambatra ary terminal terminal manan-tsaina. Azo ampiasaina amin'ny mari-pamantarana famantarana ny sosona fanaraha-maso substation.
Lanja maivana: <2.75kg
Fandidiana efijery feno
Mankato ny fenitra IEC61850, ampiharina amin'ny famindrana nomerika fiarovana, fitaovana fandrefesana & fifehezana, terminal marani-tsaina, Merge Unit ary fitsapana sy fitiliana rafitra fanaraha-maso substation.
Kitendry sy kitendry fitendry, hihaonana amin'ny fahazarana mampiasa isan-karazany.
4400mAh bateria lithium lehibe, asa mitohy mandritra ny 10 ora.
Kely habe, mora entina.
All-in-One design, Integrated IEC61850 SV & GOose, 6I + 7V analog fantsona output, Inbuilt GPS sy IRIG-B, ary ireo asa hafa mialoha.
Manaraka ny sandan'ny santionany sy ny GOose ho an'ny IEC61850 IED, ny Unit Merger sns.
Fanamafisam-peo avo lenta, loharano 6 × 32A ary loharano 7 × 130V AC.
10.4 "efijery mikasika sy efijery fitendry.
KS833 Loharano AC / DC / Harmonic Standard Source sy Calibrator (kilasy 0,05)
Open protokol ho an'ny fandaharam-potoanan'ny rindrambaiko.
Loharanon-kery AC: 3x900V @ 3x25VA, marina 0,05%
Loharanom-baovao AC ankehitriny: 3x30A @ 3x25VA, marina 0,05%
3-dingana Harmonic Standard Power: baiko 2-31x misy 0,1% marina
Loharanom-pahefana DC: 825V @ 20W max, fahamendrehana 0,05%
Loharanom-baovao DC ankehitriny: 30A @ 25W max, marina 0,05%
Fanamafisana ny zavamaneno analog / nomerika
Transducer sy calibration metatra angovo
Antoka 3-taona fanamboarana maimaimpoana, sy fikojakojana maharitra, Fanavaozana rindrambaiko sy fiofanana maimaim-poana
KS823 Loharano AC / DC / Harmonic Standard Source sy Calibrator (kilasy 0,05)
KS813 Loharano telo AC / DC / Harmonic Standard Source (kilasy 0,05)
KS803 Loharano AC / Harmonika mahazatra (dingana 0.05) dingana telo
Telo-dingana tambajotra Multifunctional Power Meter IP52 / 0.05Hz PMC180NS
Rafitra AC tokana / telo dingana
Fanadihadiana momba ny kalitaon'ny herinaratra
PMC96 andiany telo metatra fanaraha-maso elektrika
PMC96 andian-dahatsoratra fanaraha-maso elektrika dingana telo dia mandray ny efijery LCD amin'ny faritra 、 tsara tarehy sy lehibe, mifanohitra ambony; Miaraka amin'ny processeur haingam-pandeha haingam-pandeha, ny fandrefesana ireo masontsivana elektrika mampiasa ny 22 AD, ny fandrefesana angovo herinaratra, ny halaviran'ny dinika, ny fahamendrehana avo lenta. Azonao atao ve ny misafidy safidy maoderina, relay 、, modely fifandraisana RS-485, afaka manatanteraka mora foana ny fampifangaroana ny rafitra fizarana manan-tsaina isan-karazany.
Meter fanaraha-maso herinaratra dingana PMC72 Series
PMC72 andian-dahatsoratra fanaraha-maso elektrika dingana telo dia mandray ny efijery LCD karazana 、 tsara tarehy sy lehibe, mifanohitra ambony; Miaraka amin'ny processeur haingam-pandeha haingam-pandeha, ny fandrefesana ireo masontsivana elektrika mampiasa ny 22 AD, ny fandrefesana angovo herinaratra, ny halaviran'ny dinika, ny fahamendrehana avo lenta. Azonao atao ve ny misafidy safidy maoderina, relay 、, modely fifandraisana RS-485, afaka manatanteraka mora foana ny fampifangaroana ny rafitra fizarana manan-tsaina isan-karazany.
Fitsapana fampitàna lavitra, Fitsapana fampitana niomerika, Fitsapana fampitana, Fiarovana Relay Tester, Fitsapana fampitàna an-tsokosoko, Fitsapana fampitana mivantana, Vokatra rehetra